Maalmahaan Stress Ma Isku Aragtay ? Kaliya Waxaa Kugu Filan Ciyaarta Sariirta. | alcarabiya.com
Home » Nolosha » Maalmahaan Stress Ma Isku Aragtay ? Kaliya Waxaa Kugu Filan Ciyaarta Sariirta.
Maalmahaan Stress Ma Isku Aragtay ? Kaliya Waxaa Kugu Filan Ciyaarta Sariirta.
Marka laga soo tago faa`idada dhanak dhalmo ee lamaanayaasha ka helaan ciyaarta sariirta ayaa hadaan waxa ajira faa`idooyin intaas ka badan .
In aad hesho kulanka ciyaarta sariirta seddex jeer ama kabadan isbuucii waxa ay kaa yareynaysaa halis kasto oo caafimaad darro sida stress –ka wadno xanuunka joogtada ah.
Galmada lamaaneyaasha ayaa ah mid la dagaalanta wax kasta oo jermis ah iyada oo la dagaalamayso oo burburinaysana unugyada ilaa 20% .	Waxa la ogaaday oo lashaaciyay in ciyaarta sariirta ay kaa caawinayso dhinacyo badan inaga oo horey u soo ogaanay in ay leedahay in aad u e kaato qof dhalin yar oo da’ ahaan u muuqanayso qof yar hadaba kaliya ma aha intaasi oo qura balse waxa ay leedahay cimri dheeri .
Galmada badan ayaa kuu horseeda in aad ka hesho maskax furan oo si wacan u shaqeynaysa , qalbi degan iyo caafimaad hormoonada jirkaaga .
Sidoo kale odayaasha dhalinta ah oo hela ciyaarta sariirta ayaa waxa ay ka hortag u tahay in uu ku dhaco cudurka halista ah ee cancer ka , waxaana lagu boorinayaa in ay helaan galmo wanagsan , waxa u sii dheer duqowda in ay badsadaan khudrada taas oo sare u qaadeysa awoodooda ciyaarta sariirta maadama ay lumiyeen in badan.
5 Responses to Maalmahaan Stress Ma Isku Aragtay ? Kaliya Waxaa Kugu Filan Ciyaarta Sariirta.	Bushra yarey Reply
February 23, 2013 at 7:50 pm	Wa arin u wanagsan lamaanayasha ee haku dadalan cafimadkoga
February 23, 2013 at 6:26 am	Lamanuhu ha raxaystan labdi kakna haku tagnato
February 23, 2013 at 2:22 am	Kkk wey ficantahay lkn ninkan nag haysanin aya dhibeysa
Buuhoodle khaatumo state Reply
February 22, 2013 at 1:05 am	Kkkkkk waaaa arin wanaagsan lkn ninka iyo naagta aaan haysan lamaaane maxaaa xal u ah ileen sinaduna waa xaaaraaane
oday magaale Reply
February 21, 2013 at 2:07 pm	kkkkkkk jini.com alcarabiya walaahi been ma ah madax wareerka looga nastaa yaa salam ilaahoow nin fiican ii sahal